Litecoin Uru n'elu Bitcoin - Oke Magazine - pisklak.net
Litecoin Uru n’elu Bitcoin – Oke Magazine
Litecoin na-ebute ụzọn’etiti cryptos. Taa, anyị na-enyocha ọ joyụ nzuzu d e okporo ụzọ Litecoin, nke onye okike ya bụ Charlie Lee tinyebere nke ọman’otu oge:”Chee echiche na ọ bụ okporo ụzọ abụọ: Taa, Bitcoin juputaran’ụgbọala na Litecoin bụ ihe efu. Ọbụna na Bitcoin jurun’ọnụ, ụgbọ ala anaghị abịa iji Litecoin okporo ụzọ taan’ihi na ejikọtaghị un t ọ na-adịghị mma ịgafe. Lightning Network ga-arụ àkwà mmiri n’okporo ụzọ awara awara. Ma abamuru un bụ na akwa ndị a ga-ejikọ okporo ụzọ abụọ ahụ ọnụ.” Oge eruola iji chọpụta uru Litecoin.
Litecoin pụtara na 2011 dị ka ụdị nke Bitcoin. Ọ ka bụ taa otu n’ime ndị ndụ ama ama ama ama ya. Onye kere Litecoin bụ Charlie Lee, onye bụbu onye ọrụ Google.
Litecoin bụ onye kachasị ewu ewu maka ọsọ ọsọ un t ọnụ ahịa azụmahịa dị oke ala.. Ndị a mejupụtara isi Litecoin uru. Agbanyeghị, uru ndị a nwere echiche miri emi nke na-eme ka Litecoin bụrụ ihe na-adọrọ adọrọ karị, anyị ga-enyocha ha ebe a.
O nwere ike iju gị anya ịmata na Litecoin bụ 4 ugboro ngwa ngwa karịa Bitcoin. Ọ na-ewepụkwa self service na-eduga crypto mgbe ọ na-abịa ụgwọ azụmahịa dị ala:
Ọzọkwa, Litecoin bụ ike scalable. Gị, dịka onye na-etinye self explanatory, nke a pụtara na ịkwụ ụgwọ gị nwere ike ịhazi ya ngwa ngwa karịa ka ọ dị d e mbụ:
Litecoin bụ 4 ugboro ngwa ngwa karịa Bitcoin n’ihi na ọ nwere ike kọọrọ hazie ihe dịka azụmahịa 56 kwa nkeji. Nke a gbagwojuru crypto ọ bụla ọzọ taa. Ma ọ gwụbeghị! Oge nkwenye dị mkpirikpi na-eme ka nchebe nke azụmahịa ahụ dịkwuo elu, yabụ anyị nwere ike ikwu n’enweghị nsogbu na Litecoin na-aghọ otu n’ime mkpuchi kachasị mma n’oge a.
Ọzọ, ọnụ ọgụgụ nke Litecoin nkeji bụ 84 nde self explanatory, nke bụ ụzọ karịrị Bitcoin si elu ịgba nke 21 nde:
Ọnụ ọgụgụ buru ibu nke LTC na-enye crypto a uru nke uche, ebe anyị ka ga-ahụ ma ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nkeji ga-eme ka ọnụahịa ahụ belata, n’ikpeazụ.
Netwọk nke na-enye ohere ka onye ọ bụla n’ụwa mee mgbanwe na protocol, ọ bụkwa ihe dị mma. N’ihi gịnị? N’ihi na anyị na-achọ mgbanwe mgbe niile na protocol iji mejuputa ya, ka anyị niile miniature nwee ike ịmekọrịta d e mkpa ahịa ma mee ka ihe na-aga nke ọma.
Oke cha cha Crypto Oke na-akpọ gị oku ka ị nwalee nhọrọ nkwụnye self love kachasị mman’oge a miniature hụ yan’onwe gị. Anyi kwesiri ibun’uche ka imara self service gi, nihi na anyi na adi otu.